Farmaajo oo ka bilaabay dalka Kenya dhaqankii iibsashada saxaafadda iyo dowlada Kenya oo ka warheshay (Xog) – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Farmaajo oo ka bilaabay dalka Kenya dhaqankii iibsashada saxaafadda iyo dowlada Kenya...
Farmaajo oo ka bilaabay dalka Kenya dhaqankii iibsashada saxaafadda iyo dowlada Kenya oo ka warheshay (Xog)
Qareenka isla markaana ah Ganacsade Kenyaan ah oo ay ilma adeer yihiin Madaxweyne Farmaajo, Axmad Adanoo loo yaqaano (Axmad Dheere) iyo koox isaga la shaqeeysa ayaa waxa ay ka bilaabeen dalka Kenya in ay lacago badan ku bixiyaan sidii warbaahinta Kenya ay war fiican uga qori lahayd Madaxweyne Farmaajo iyo Dowladiisa.
Axmad Dheereayaa waxa uu gacanta ku hayaa lacagaha uu Madaxweyne Farmaajo sida farsameeysan dalka Soomaaliya looga soo qaado iyada oo lacagtaas si dadban lagu geeyo dalka Kenya. Axmad Dhere ayaa labadii asbuucba mar yimaada magaalada Muqadishu isaga oo la kulmaya MW Farmaajo, ka dibana maalin ama saacado ka dibna ugu dib ugu laabto dalka Kenya.
Dhowrkii asbuuc ee ugu danbeeyay ayaa Axmad Dhere oo wakiil ka ah MW Farmaajo waxa uu lacago siiyay dhowr saxafadood oo isugu jira Raadiyo iyo Wargeysyadda ka soo baxo dalka Kenya. Arintaan ayaa soo baxday ka dib markii sirdoonka dalka Kenyaay ka warheleen in dhowr wargeys ay qoreen qoraalo si qaldan uga tarjumaya shirkii sadax geesoodka ahaa ee ka dhacay magaalada Nairobi.
Dowlada Kenya ayaa durabadiiba waxa ay ku wargalisay sadaxda Wargeys ee ugu waaweyn dalka Kenya in ay ka digtoonaadaan in la iibsado. Qaarkoodna waxaa loo sheegay in laga warhayo cida lacagta bixisay, meesha lacagta lagu bixyay iyo ujeedada laga lahaa?.
Habeenkii bishu ahayd Maarso ahayd 6da wargeyska wayn ee standard qaybtiisa Internet-ka ama loo yaqaano Standard Digital Mediaayaa waxa laga joojiyay qormo ka been abuureysay shirkii sadax geesoodka ahaa kaas oo lagu amaanayay Farmaajo. Ujeedada ayaa ahayd in lagu qoro wargesyka in Farmaajo diiday in wadahadal lagu dhameeyo murabka u dhaxeeya labada ka dibna warkaas loo tarjuno dadka Soomaaliyeed. Arintaana ayaana ah mid ka fog runta iyo go’aanadii ka soo baxay shrikii sadax geesoodka ahaa.
Dhanka kale waxaa uu Axamad Dhere lacag siiyay professors iyo aqoonyano Kenyaan ah in ay qoraan maqaalo ku qoran luuqada Ingiriiska oo lagu qoro magacooda kuwaas oo diyaarinaya qormooyin taageerayo fakarka Farmaajo. Ka dibana waxaa lagu soo daabacayaa wargeysyadda dalka Kenya iyada oo laga dhigayo in warkaas uusan ka imaanin MW Farmaajo.
Dowlada Kenya ayaa fartiin culus u gudbisay madaxda wargeysyadda ka soo baxa dalka Kenya uguna digtay saafadda Kenya in aan la iibsanin oo ay noqdaan kuwa ka tarjuma xaqiiqda runta ah. Dhanka kale Dowladda Kenya ayaa waxa ay fartiin gaarsiisay Agaasime ku Xigeenka hay’adda Nabad Sugida Qaranka (NISA) Fahad Yasinoo loogu sheegay in dowlada Kenya la socoto isku dayga iibsashada Saxaafadda dalka Kenya oo ah mid madax banaan. Fahad ayaa ka haray wafdiga madaxweynaha isaga oo kulamo gaar ah la qaatay Sirdoonka dalka Kenya.
Waxaa sidoo kale lacago la siiyay wargeyso yar yar oo aan aad looga aqrisan dalka Kenya, qaarkoodna waa kuwo ku kooban Internetka iyo Baraha Bulshada.
Sida loo xaqiijiyay MOL, Fahad Yasin ayaa ka dhaartay in uusan isaga war u haynin cida ficilkaas geysatay laakiin waxa uu balan qaaday in uu fartiintaas gaarsiin doono Madaxweyne Farmaajo.
Farmaajo iyo Kheyre oo horay u burburiyay saxaafadii madaxa banaaneed ee Soomaaliya ka dib markii ay intooda badan lacag ku iibsadeed ayaa waxa ay hadda damac ka soo galay in sidoo kale ay iibsadaaan saxafadda Kenya.
RW Kheyreayaa horay waxa uu lacag u siiyay Professor Peter Kagwanjaoo dhor mar soo qoray qoraalo lagu amaanayo RW Kheyre.
Previous articleHowlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo ka dhacay Sh/Dhexe
Next articleSawirro:-Qarax Miino Oo Xalay Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Wajaale : Afar Qof oo ku Dhintay Dhisme Ku Dumay
Banaanbixii ka socday Muqdisho oo sii xoogeestay + Sawiro